2010 July « नेपाली मुटु
यसैले तपाईले पनि नेपाल विकाश बैकमा बचत गर्नु भएको थियो र, फिर्ता आउँने दिन पर्खेर बसिरहनु भएको छ भने चाँडो जानुहोस् है । फेरि ठ्याक्कै तपाईको अगाडी चेक सकिएला नि । Continue Reading लाईन लाग्न जानुहोस्, पैसा आउँछ >>
यस्तो स्थितीमा अझै कति बसिरहने हो देश कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई शिरमा बोकेर । अब नियमावली परिवर्तन गरेर पुनः नेतृत्वको खोजी गर्नु पर्दछ भन्नेको पनि आवाज बाक्लिदै आउँदैछ । तपाई के भन्नुहुन्छ ? पुरानै उम्मेदवारबाट जति पटकमा भए पनि प्रधानमन्त्री छान्ने हो कि नियमावली परिवर्तन गरेर नयाँ उम्मेदवारी खोज्ने हो ? आफ्नो कुरा लेख्नुहोस् है । Continue Reading चुनाव नै कि अर्को उपाय गर्ने हो ? >>
Posted in चुप लाग्न नसक्दा |7Comments »
१५ दिन भित्र इराकबाट ३० हजार नेपाली कामबाट नेपाल फिर्ता हुनु पर्ने अमेरिकी सेनाले जनाएको थियो । नेपाली र फिलिपिनो नागरिकहरु गैरकानुनी रुपमा अन्य देशको बाटो हुदै इराक पुगेर काम गर्दै आएका थिए । तर अमेरिकी सेनाको गैरकानुनी कामदार आफ्नै मुलुक फिर्ता हुनु पर्ने नियम जारी गरे पछि नेपाली र फिलिपिनो नागरिकमा अन्यौलताको सृजना भएको थियो । मुलुक भित्र बेरोजगार युवकहरु धेरै पैसा कमाउँने उद्देष्यले भारतको बाटो हुदै इराक प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसरी इराक पुग्ने नेपालीको संख्या तिस हजार पुगिसकेको त्यहाँ स्थित अमेरिकी सेनाले बताएको छ । तर नेपाल सरकारलाई त्यहाँका कामदारले इमेलबाट आफ्नो स्थितीको जानकारी दिए पछि नेपाल सरकारले इराक प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भएको छ । Continue Reading फर्कनु पर्दैन कि इराकबाट >>
Posted by गणेश कार्की on July 26, 2010
पुरा पढ्न भित्र आउँनुहोस्
भाका सार्नको पनि एउटा हद हुन्छ नि । दुई बर्षमा नयाँ संविधान दिने भनेको एक बर्षको भाका थपियो । सेना समायोजनको त कुरा नै छाडौं । त्यो पनि पुरा हुन्छ होला भनेर धेरै नेपालीलाई विश्वास लाग्दैन, त्यै पनि भाका सरिरहन्छ । हुँदा–हुँदा सरकार तसहमतीको नभए पनि बहुमतको त भनेको समयमा नै बन्ने गथ्र्यो । अब त त्यसको पनि भाका सर्न थालेको छ । आज भएको चुनावमा न त प्रचण्ड न त रामचन्द्र पौडेल, कसैले पनि बहुमत पु¥याउँन सकेनन् । पुगोस् पनि कसरी एमाले, मधेसी दलहरु र अरु साना दलहरु रिसाएर माइत गएकी दुलही जस्ती भएर भोट नहाल्ने भएर बसेका छन् । अनि माओवादी र कांग्रेसका त आफ्ना आफ्ना उम्मेदवार छदैछन् । यसैले सबैले सोचे अनुसार आज पनि नयाँ सरकारको टुङ्गो लागेन । अब साउन १७ गते नाटकको अर्को भाग पस्किने रे । यो भाका सार्न र नयाँ नयाँ नाटक देखाउँन हाम्रा नेताहरु यत्ति सक्षम छन् कस्ले सोचेको थियो होला र ? Continue Reading नाटक फेरि १७ गते रे >>
माछा माछा भ्यागुतो भो झलनाथलाई
झलनाथ : लास्टमा त्यै भो, रित्तो हात !
हिजो राजनितीक वृतमा एमाले अध्यक्ष एक्कासी हावी भए । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी गर्दै उम्मेदवारी दिदा सम्म उनको सम्भावनालाई न्यून नै मानिएको थियो । तर एकाबिहानै माओवादीले खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पछि भने उनको सम्भावना अकाशियो । भटाभट एमाले अध्यक्षलाई समर्थनका पत्रहरु प्राप्त हुन थाले । संसद बैठक हुने समयसम्म उनलाई ३९१ मत प्राप्त भइसकेको थियो । बाँकी १० मत नै उनको लागि दुर्भाग्यपुर्ण रह्यो । यसैले स्पष्ट बहुमत हुदाहुदै पनि दिल्लीका प्रभु र उनका चरणदास ओली र नेपालको चुक्लीले उनी नेपालको ३४ औ प्रधानमन्त्री हुने दौडबाट बाहिर निकालिए । जसोतसो उनले उम्मेदवारी त दिए, तर माओवादीका छनौटका नेता भएकै कारण दिल्ली र सिल्लीका नजरमा उनी नालायक भए अनि लोकतन्त्रका ढर्रा पिट्ने कमनिष्टहरुबाटै रेडकार्ड देखाइए । शुक्रबार हुने फाइनलमा अब खनाल हुने छैनन् । Continue Reading माछा माछा भ्यागुतो भो झलनाथलाई >>